Abavelisi beGPS Smart | Jgo
Isisombululo esinye sokumisa kwizixhobo ezibalaseleyo
Iindlebe kunye nee-headphones
Iindlebe ezingenazingcingo ezingenazingcingo
Ujikeleze iintloko zentloko
I-Wature ye-smart smart
Ikhaya > Iimveliso > I-Wature ye-smart smart > I-GPS ibukela
I-GPS Smartwatches ikwabizwa ngokuba ziiwotshi zokuhlala kunye neewotshi ezilahlekileyo, yimveliso ye-elektroniki enokwazi ukwenziwa kwesatelling, imisebenzi ye-Fowuni kunye neminye imisebenzi ..
I-GPS yokubeka iwotshi yenye i-epoch-yokwenza utshintsho lwetekhnoloji ebantwini'uphila. Logama nje usenza lewo lo mlindo, nokuba ubukhona ehlabathini, unokufumana ngokuchanekileyo indawo yayo. Ke kwenzeka njani ukuba kubekwe njani i-GPS? Ngalo mbuzo engqondweni, umbhali uzabalazela ukuchaza ngokucacileyo imigaqo kunye neempawu ze-GPs zibeka iifowuni eziphathwayo kunye neewotshi.
I-GPS ye-GPS yeSatellite kunye nokubeka iiwotshi zixhotyiswe ngezixhobo ezizodwa ukugcina unxibelelwano kunye nesatellite kwisithuba. Iisatellite zinokudlulisela olu lwazi kwiwotshi ye-elektroniki nangaliphi na ixesha, ke unako ukufumana umsebenzi wokuhambahamba kwesatellite nokuba usekupheleni kwehlabathi. Kule mihla, ukhuseleko lwabantwana kuye kwanenkxalabo yabazali, kwaye uye waba ngumnqweno wabazali abaziintanda abantu ukuba bayazi abantwana babo'Indawo kunye neendlela ze-SIT"Olu hlobo lwefowuni ye-elektroniki lusebenzisa umsebenzi ophakathi we-GPS ye-GPS ye-GPS kunye ne-GPRS yenethiwekhi yenethiwekhi. Kwiindawo ezinemiqondiso ye-GPS ye-GPS, okoko nje kukho umqondiso wenethiwekhi onesitayile, sinokuyiqonda ngokuchanekileyo indawo yomntwana. Ngokwembono yezobuchwephesha kwi-junriifang, uyilo lwefowuni ephathekayo kwisitayile sebukela asingeyiyo imbovelelo, ilungele ukuthwala, kwaye akukho lula ukuphulukana. Ungayijonga le ndawo nangaliphi na ixesha ngeendlela ezahlukeneyo ezinje ngemiyalezo ebhaliweyo, ukufikelela kwi-Intanethi, ukufikelela kwi-Intanethi, ukufikelela kwikhompyuter, njl. Njl.
Ukongeza, phantsi kweemeko ezizodwa, abazali banokukhetha nayiphi na indawo njengoko i-alamu iqonga. Logama nje umntwana engena okanye uphuma kuluhlu ngebukela nge-elektroniki kunye nefowuni, abazali banokufumana umyalezo wombhalo wesikhumbuzo. Ngapha koko, ine-SOS-ephambili yomsebenzi woncedo. Nje ukuba umntwana avakalelwe kwimeko ebalulekileyo, ucinezela isitshixo, nokuba akathethi, ifowuni ephathekayo iya kucofa umzali'ifowuni. Yonke into eyenzekayo ijikeleze umntwana inokuviwe ngumzali kwelinye icala lefowuni. Ukucaca kubaluleke kakhulu kubazali abasoloko bexhalabele ukhuseleko lwabantwana babo.
Ngamafutshane, ukufika kwee-GPS zokubeka iifowuni eziphathwayo kunye neewotshi zikufumene abazali' ukhathalela abantwana ixesha kunye nendawo, kunye nabantwana'ukhathalelo lwengqondo kubantu abadala. Xa lasungula, GPS iiwotshi mobile phone ziye wayehlonelwa yi emarikeni. Ayifumani kuphela abantwana nabantu abalupheleyo, banokusetyenziswa nakwihambo, ukuqhuba kunye nophando. It is a imveliso entle kakhulu kwaye aluncedo.